"သုံး"ကြိုး | မိုးသကျဦးလှငျ
Home » အက်ဆေး » "သုံး"ကြိုး
ဒဂုံစင်တာမှာ ထုံးစံအတိုင်း လူတွေတော်တော်စည်ကားနေတယ်..။ ရုံးပိတ်ရက်မို့ ဈေးဝယ်တွေ ပိုများနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်..။ Window shopping လုပ်တဲ့ စုံတွဲတွေ ပိုများနေတာကို တွေ့ရတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ သူ့ကို သွားသတိရနေမိပြန်တယ်..။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဟိုးရှေ့မှာ အင်္ကျီအဝါလေးနဲ့ တစ်ယောက်က သူနဲ့ တော်တော်လေးဆင်နေတာကို တွေ့လိုက်မိတယ်..။ မျက်နှာကို မမြင်ရပေမယ့် သူဝတ်တတ်တဲ့ ပုံစံမျိုး ခပ်ယဉ်ယဉ်လေးပဲ…။ နောက်ကနေပဲ မြင်ရလို့ မသိစိတ်ရဲ့ စေ့ဆော်မှု ကြောင့် အလောသုံးဆယ်နဲ့ ရှေ့ကို တက်သွားမိတယ်..။ အဝတ်အစားထုပ်တွေ ဆွဲလာတဲ့ ခပ်ငယ်ငယ် ချာတိတ်တစ်ယောက်နဲ့ ဝင်တိုက်မိမလိုတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်..။ အနားရောက်တော့ အမှတ်မထင် သူလှည့်ကြည့်တယ်..။
ပါးစပ်က ထုတ်မရွတ်မိပေမယ့် .. သူမှ သူအစစ်ပဲ..။ မြင်နေကျ အပြုံးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့ပေါ့..။ အဲဒီအပြုံးက ယဉ်ပေမယ့် တည်တယ်.။ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလွန်းပေမယ့် တင်းတင်းစေ့ထားတတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းကတော့ အနားကပ် မယ့် ပုရိသတွေကို ရှေ့ဆက်မတိုးဝံ့စေတဲ့ အမူအယာမျိုးရှိတယ်.။ အရာရာကို ပေါ့ပေါ့ တန်တန်သဘောမထားဘဲ တည်ငြိမ်မှုတွေအပြည့်ရှိတယ်.။ သူနဲ့ ကျွန်တော် အသက် ၆ နှစ်လောက် ကွာပေမယ့် ကျွန်တော်တောင် သူ့လောက် မရင့်ကျတ်နိုင်သေးတာကို သတိရမိတယ်…။
သူကျွန်တော့်ကို မြင်သွားတယ်..။ ပြီးတော့…
အနားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်လာတယ်..။ သူကတော့ မသိဘူး.. ကျွန်တော်ကတော့ ချွေးတွေ ပြန်နေ တယ်လေ…။ ကျွန်တော်ချစ်ရေးဆိုထားတယ်ဆိုတာထက် သူကျွန်တော့်ကို ခါးခါးတူးတူးမုန်းသွားတယ်ဆိုတာ သေချာတယ်မဟုတ်လား..။ ကျွန်တော်ဟာ အဖြူရောင်စည်းကို ဖောက်မိသူ..။ ကျွန်တော်ဟာ နွေးထွေးမှု တွေအစား စိမ်းကားမှုတွေနဲ့ ထိုက်တန်သူပါ..။
သူကတော့ ကျွန်တော့်အနားရောက်လာပြီ.. ။ ဒီအချိန်မှာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို ကျွန်တော် ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်။ သူကျွန်တော့်ကို ဘာပြောပြော ကျွန်တော် ခေါင်းငုံ့ခံဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား..။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးမိတယ်..။ သေချာတယ်..။ သူ့ကို ကျွန်တော် ဘယ်တုန်းကမှ စိတ်မဆိုး ခဲ့ဖူးဘူးလေ.။ သူပေးသမျှ အပြစ်တွေကို ခံယူဖို့အသင့်ပါ..။ သူ့စိတ်ထဲကအမုန်းတွေ ကျေဖို့၊ သူ့ရင်ထဲက စိတ်ဆိုးမှုတွေ ပြယ်ဖို့.။ နောက်..
ကျွန်တော့်အတွေးမဆုံးခင် သူကျွန်တော့်ကို ခေါ်နေကျပုံစံအတိုင်းပဲ ခေါ်တယ်..။ သူ့မျက်နှာက အပြုံးက ကျွန်တော် အရင်နှစ်ခြိုက်စွဲလန်းစေတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ..။ အဲဒီအတိုင်း..။
ကျွန်တော်ဘာမှ မပြောခင် သူမ ကျွန်တော့်လက်ကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်..။ အံ့သြခြင်းကြီးစွာနဲ့ လိုက်နေရ ပေမယ့် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲက ဘယ်လောက်ဝမ်းသာနေမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြလို့ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မထင်မိဘူး..။
ဟာ.. ကျွန်တော့်စကားမဆုံးခင် သူကျွန်တော့်ပါးကို ဆတ်ကနဲ လှည့်ပြီး နမ်းလိုက်တယ်.။ ဒါ… ဒါဆို..။
ဘယ်လိုလဲ..။ ဘယ်လိုလဲ..။ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်ပျော်သွားသလဲဆိုတာ ပြောပြစရာ စကားလုံး ရှာမတွေ့ဘူး..။ ကလေးတစ်ယောက်လို မြူးထူးခုန်ပေါက်မိလိုက်သလားမသိဘူး.။ Shock ရသွားတဲ့ အခြေအနေမှာ ပျော်စရာကို ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်တဲ့ဦးနှောက်ရဲ့ နှေးကွေးမှုကြောင့် လူဟာ ၅ စက္ကန့် လောက် ရပ်တန့်သွားတာကို သတိထားမိတယ်…။
အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခါးမှာချိတ်ထားတဲ့ ဖုန်းကဝင်လာတယ်.။ ဖုန်းကို ကိုင်လိုက်တယ်.။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းသံက ရပ်မသွားဘူး.။ အဲဒီအချိန်မှာ လူက ဖျက်ကနဲ သတိဝင်လာတယ်.။ ဒါ.. ဒါ…။
ဟုတ်တယ်..။ ကျွန်တော် အိပ်မက်မက်နေတာ..။
သတိဝင်လာပြီး အိပ်ရာဘေးက ဖုန်းကိုကိုင်လိုက်တဲ့အချိန် လူကချောက်ကမ်းပါးတစ်ခုထဲကို ပြုတ်ကျသွား သလိုခံစားလိုက်ရတယ်.။ အပျော်ဆုံးခံစားမှုတွေ အစား အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေ ပြန်ရောက်လာတယ်။
ပါးစပ်က တိုးတိုးလေးရွတ်လိုက်တယ်.။ ဝင်လာတဲ့ ဖုန်းက နံပတ်အစိမ်း..။
ပြန်ခေါ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲ.. စိတ်ထဲက ကျိန်ဆဲလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အဲဒီပျော်ရွှင်မှုမျိုး ဘယ် တော့များမှ ခံစားရဦးမှာလဲ..။ တွေးရင်းနဲ့ ရင်တွေမောလာမိတယ်.။ ဖုန်းကို ပြန်ပိတ်ရင်း Adapter က အားသွင်းကြိုးကို ပြန်တပ်လိုက်တော့ Day Dream ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ သူမပုံလေးတွေက ဖုန်း Screen မှာ ပေါ်လာတယ်။ ဖုန်းပေါ်က သူမပုံလေးတွေကတော့ ပြုံးနေဆဲပဲလေ..။ လှိုက်မောတုန်ရီနေတဲ့ စိတ်နဲ့ ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်မိသလား ကျွန်တော် မသိတော့…။
ကျွန်တော် ဂစ်တာတီးတာကြာပြီ..။ ဆယ်တန်းပြီးကတည်းက ဆိုပါတော့.။ ကျွန်တော့်မှာ ဂီတနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Sense တစ်ခုတော့ရှိတယ်.။ ကျွန်တော်က အားကစားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အားနည်းပေမယ့် အနုပညာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပိုးရှိ တယ်ဆိုရမလားပဲ.။ ကျွန်တော် အားတဲ့အချိန်တိုင်း ဂစ်တာတီးလေ့ရှိတယ်.။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့.. ကိုငှက်သီချင်းတွေ အများစု..။
"သူပန်ထားတဲ့ ပန်းနီနီ.. နေရာခဏ လဲချင်သည်.. ကြင်နာသူလေး လှဖို့ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားမည်… ရင်မှာဒီလောက်ချစ်ပါသည်. သူပြောတာအမြဲတွေ့ချင်သည်… အလှမ်းဝေးတဲ့ ပန်းကလေး မြနှင်းဆီ…."
သီချင်းက ဆိုလို့တော့ ကောင်းပါရဲ့..။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ သူ့ပုံတွေထဲမှာ ပန်းနီနီ ပန်ထားတဲ့ပုံ မမြင်ဖူးဘူး။ သူပန်းအဝါလေးတွေကိုင်ထားတဲ့ပုံပဲရှိတယ်.။ နောက်ပြီး သူ့နာမည်ကလည်း မြနှင်းဆီမဟုတ်..။
တိုက်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ သီချင်းကို ဆိုရတာ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေးတော့ ကသိသအောက်ဖြစ်မိတယ် ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လက်ခံမလားမသိ..။ ဘာရယ်မဟုတ်…။ သူ့ကို ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေက နည်းနည်းတော့ ထူးခြားတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း လူကသာဘာရယ်မဟုတ်တာ.။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိကြိုက်မိတဲ့အခါ ကိုယ့်အနေနဲ့ Impression ရှိတဲ့သူမျိုး၊ ကိုယ့်ဖက်က လေးစားစရာရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးကိုမှ ချစ်တတ်တာမျိုးဆိုတာ မိတ်ဆွေရင်းတွေ သိကြမယ်ထင်တယ်..။
"သမီး" တဲ့.။ သူ့ကိုယ်သူ သုံးတဲ့ နာမ်စားလေး..။ ပတ်ဝန်းကျင်က မြင်ရင် သက်ကျားအိုနဲ့ ကညာပျိုလို့ ထင်လေ မလားမသိ.။ ဘာကြောင့်မို့ ချစ်လဲ..။ ကျွန်တော့်မှာ ဖြေစရာအဖြေမရှိ.။ သူ့ရဲ့ ချစ်ခင်နှစ်လိုဖွယ် အမူအယာ တွေကြောင့်လား..။ ဟင့်အင်း..။ သူ့ရဲ့ တည်ငြိမ်နွေးထွေးတဲ့အပြုံးကြောင့်လား..။ ဟင့်အင်း..။ သူ့ရဲ့ ဖြူစင်ရိုးသား မှုကြောင့်လား.။ ဟင့်အင်း..။ သူလှလို့လား..။ အို.. ပိုတောင် ဝေးသွားပြီ..။ လှတာကြိုက်ချင်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မိန်းမလှ တွေအများကြီးမဟုတ်လား.။ ဒါပေမယ့် … သူ့ကိုပဲ တန်းတန်းစွဲနေမိတာ ဘာကြောင့်လဲ လို့ ပြန်မေးရင်တောင် ကိုယ်တိုင် ဖြေစရာအဖြေမရှိဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့.။
တွေးနေရင်းနဲ့ လက်က ဂစ်တာကို ဆ နေမိတယ်။ ကျွန်တော့်အသံက ညာသံဖက်ပါတယ်လို့ ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောဖူးရဲ့..။ ကိုယ်တိုင်က Country သီချင်းတွေအကြိုက်များတယ်။ Country အသံတော့ မရှိတာသေချာတယ်.။ ဂစ်တာကိုဆ နေရင်း တစ်ခုခုကို သတိထားမိလိုက်တယ်.။ နံပတ်"သုံး" ကြိုးလေး ပေါက်နေတယ်..။ ကြိုးပေါက်တယ်ဆိုတာ သုံး ကြိုးအပေါ်ကပတ်ထားတဲ့ ကြေးဝိုင်ယာစလေးတွေပြတ်ပြီး ပြေနေတာမျိုး။ အဲဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ ဂစ်တာက အသံထုံထုံထိုင်းထိုင်းဖြစ်သွားတယ်။ အစတွေထွက်နေရင် ခါသံတွေ၊ Noise သံတွေပါ ပါလာတတ်တာမျိုးလေ.။ ဟုတ်တယ်..။ ကျွန်တော့်ဂစ်တာက တတိယမြောက် နံပတ် "သုံး" ကြိုးလေး ပေါက်နေတယ်။
ဂစ်တာသမားတိုင်း ကြိုးအပိုတော့ ဆောင်ကြတာများတယ်။ အများစုက ပြတ်လွယ်တဲ့ နံပတ်"တစ်" ကြိုးကို ဆောင်ထားတတ်ကြတယ်.။ ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုပဲ.။ ဂစ်တာအိတ်ထဲမှာ နံပတ်တစ်ကြိုး နှစ်ချောင်းတောင် အပို ထည့်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ "သုံး" ကြိုးအပိုမရှိဘူး.။ သုံးကြိုးပေါက်တတ်တာ လူတိုင်းသိပါရဲ့.။ ဒါပေမယ့် ကြိုးအပိုဝယ်တိုင်း ပြတ်တတ်တဲ့ တစ် ကြိုးကိုပဲ ဝယ်ကြတာများတယ်လေ.။ လူတွေ သတိမထားမိတာက ဂစ်တာကြိုး ဆိုတာ ပြတ်ရုံတင် ပြတ်တတ်တာမဟုတ်ဘဲ. ပေါက်လည်း ပေါက်တတ်တယ် ဆိုတာကိုပါ.။ သိတော့ သိတယ်.။ သတိ မထားမိဘူးပေါ့..။
သူနဲ့ ကျွန်တော် စတွေ့တုန်းက အဲဒီ ဒဂုံစင်တာမှာပဲလေ..။ ပထမဆုံးအကြိမ် စတွေ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက် နေ့ပေါ့.။ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ဖြူစင်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ ပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ဘူး.။ နောက် သူ နေပြည်တော်ကို မိသားစုနဲ့ လာတယ်.။ ကျွန်တော့်ကို လာတွေ့ဖို့ ခေါ်တယ်..။ ဘာကြောင့် သွားမတွေ့မိသလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားလို့ မရဘူး..။ အချိန်တွေကိုသာ နောက်ပြန်လှည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်….
တစ်ခါတစ်ခါ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အတွေးဟာ နားလည်ရခက်တယ်.။ တစ်ယောက်တည်း ဂစ်တာ ထိုင်တီးနေ တာမြင်ပါလျက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းလားလို့ မေးတာမျိုးပေါ့…။
"ဟင့်အင်း.. ဘေးမှာ မဖဲဝါ ထိုင်နေတယ်…"
ရွဲ့မှန်းသိတော့ ပြောမနာဆိုမနာ သူငယ်ချင်းပီပီ ပက်ကနဲ ဆဲရေးပြီးမှ အောင်အောင်က ဘေးနား ဝင်ထိုင်တယ်။
အလိုက်ကမ်းဆိုးမသိခြင်းဟာလည်း အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုပေါ့..။
ကျွန်တော် ပြောချင်စိတ်မရှိဘူး.။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရှက်ရွံ့နေမိတာလဲပါတယ်.။ သူက သူ့ချစ်သူ နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်လို့ ဆိုတယ်.။ နောက်တော့ ကျွန်တော်ချစ်ရေးဆိုမိတယ်..။ အဲဒီအချိန်ကျမှ သူက သူ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းမခွဲသေးပါဘူး လို့ဆိုတယ်.။ ကဲ .. ဘယ်သူမှားသလဲ..။ တစ်ခါတစ်ခါ လောကကြီးဟာ သိပ်ရယ်ရတယ်..။ မျက်ရည် စက်စက်ကျအောင် ရယ်ရတာမျိုးပေါ့..။ ရေကာတာဆိုတာ ဖွင့်ချပြီးမှ ပြန်ပိတ်ဖို့ သိပ်ခက်တယ်မဟုတ်လား.။ သူ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းမခွဲသေးဘူးလို့ ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာက ရေကာတာလို ဖွင့်ချလိုက်ပြီးပြီလေ..။
အဲဒီစကားက ဘယ်လောက်ထိလဲ ခံစားဖူးတဲ့သူတွေ သိမှာပေါ့ဗျာ..။ ငြင်းပယ်ခံရတဲ့ လူတိုင်း သိကြမှာပေါ့။ မြားဆိုတာ ပစ်တဲ့သူထက် ပစ်ခံရတဲ့သူက အတိမ်အနက်ကို သိတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ…။
ဒီကြားထဲ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ မီးမရှိ၊ ရေမရှိ၊ အင်တာနက်မမိတဲ့ နေရာတွေကို ခဏခဏ ခရီးထွက်ရတယ်.။ စိတ်ကတော့ သူ့ဆီမှာပဲအမြဲရှိနေတယ်.။ ၁၆ နှစ်သားကလေးလည်း မဟုတ်ပါဘဲနဲ့ ဘာလို့များ ဒီလို ဖြစ်နေရသလဲ ကွယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးမိပေမယ့် အဖြေမရှိဘူးလေ.။ ပျော်ပျော်နေတတ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင် နေနေ ရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာတော့ သူနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသစ်အသစ်သော ခံစားမှုတွေက အမြဲတမ်း နုပျိုနေတာမျိုးပေါ့..။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေးကြည့်ရင်းနဲ့ပဲ ခံစားချက်က လေးသထက်လေးလာတတ်တယ်..။ တကယ်တော့ ကျွန်တော် သူ့ကို အရမ်းချစ်နေတာ..။ ဟုတ်တယ်..။ အရမ်းချစ်နေတာ..။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်လိုက်တော့.. အောင်အောင်ကပါ ရောယောင်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်တာကို သတိထား မိလိုက်တယ်.။ ငါ့ခံစားချက်တွေကို မြင်ပြီလား သူငယ်ချင်း..။ ငါ့အတွက် သူက အရေးအကြီးဆုံးပါ..။ ငါ့ ပျော်ရွှင်မှု၊ ဝမ်း နည်းမှုတွေ အကုန်လုံးက သူပိုင်ဆိုင်ထားတာ…။
အမှန်တရားဆိုတာ နည်းနည်းမဟုတ်ဘဲ.. တော်တော်လေးကို ခါးပါတယ်…။ နောက်ဆုံးတော့ သူ့ရဲ့ ဥပေက္ခာတွေထဲမှာ နေသားကျသလိုလိုတောင် ဖြစ်လာသေးရဲ့..။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လို မြင်မလဲ.ဆိုတာ မစဉ်းစား မိတော့..။
အဲဒီနေ့ညနေဟာ လွမ်းစရာကောင်းလွန်းတယ်..။ သူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ထဲကို ဝင်ကြည့်တော့ သူ့အပြုံး တွေထဲမှာ အချစ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ ရှာမတွေ့…။ ဟုတ်တယ်ကလေးရယ်..။ မင်းဟာ တကယ့်ကို စက်ရုပ်မလေး ပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ စက်ရုပ်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်မိတဲ့ အရှင်လတ်လတ်လူသားတစ်ယောက်ပေါ့..။ ဘယ်သွား သွား ဘာလုပ်လုပ် သတိရစရာတွေက ကြုံနေတုန်းပဲ.။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်မိရင် သူသောက်ဖို့ သုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ရေနွေးခွက်လေးတွေ ကို သတိရတယ်.။ ခေါက်ဆွဲဆိုင်သွားရင် သူစားဖို့ သပ်ပေးခဲ့တဲ့ တူလေးတွေကို သတိရတယ်။ ပြုံးပါ..။ အမြဲပြုံးနေပါ ကြယ် လေးရယ်..။ မင်းဘဝထိပ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါ မင်းရဲ့ အလင်းရောင်ကို မျှော်လင့်နေတဲ့ ကမ္ဘာသား တစ်ယောက်ကို မမေ့နဲ့ပေါ့…။
ဘေးမှာ သူငယ်ချင်းက ဂစ်တာတီးနေတယ်…။
"မင်းရဲ့နှလုံးသားထဲ ကိုယ်မရှိမှန်း သိပေမယ့်… သူများတော့ သွားမချစ်နဲ့ လွယ်လွယ်လေးနဲ့… ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲ မလာချင်မှန်းသိပေမယ့်… ကိုယ်ချစ်လို့ တားမြစ်တယ်..အချစ်ရယ်… နှမျောတယ်…" တဲ့..။
ဂစ်တာက နံပတ် "သုံး" ကြိုးပြတ်နေပေမယ့်. အောင်အောင်ကတော့ မသိကျိုးကျွန်ပြုပြီး ဆက်တီးနေလေရဲ့.။ နံပတ် "တစ်" ကြိုးလေးပြတ်နေခဲ့ရင်တော့ သူကြိုးတစ်ချောင်း လဲ ပြီး တီးမှာ သေချာတယ်.။ တကယ်တမ်းတော့ "တစ်" ကြိုးထက် "သုံး" ကြိုးပါတဲ့ ဂစ်တာကော့ဒ်က ပိုများတယ်ဆိုတာ အောင်အောင် မသိဘဲ မနေပါဘူး..။ ဒါပေမယ့်လည်း "သုံး" ကြိုးရဲ့ ဒဏ်ရာပေါက်ပြဲမှုကို လျှစ်လျူရှုပြီး သီချင်းဆက်တီးနေတာပဲမဟုတ်လား..။ တာဝန်ပိုကြီးတဲ့ "သုံး" ကြိုးဟာ ပေါက်နေပေမယ့် သီချင်းတွေကိုတော့ ကောင်းကောင်း သီကြွေးနေနိုင်တာပဲလေ..။ သူ့ရဲ့ ဥပေက္ခာတွေ ဘယ်လောက်များများ ကျွန်တော်သူ့ကို မမုန်းရက်တာ ကျွန်တော်နဲ့ ဘုရားပဲ သိပါလိမ့်မယ်…။ သူဘယ်လောက်ပဲ စိမ်းကားနေပါစေ..။ ဘယ်လောက်ပဲ လျှစ်လျူရှုထားပါစေ..။ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ချစ်ခြင်းလင်္ကာတွေ ဖွဲ့နေဦးမယ့် "သုံး" ကြိုးတစ်ယောက် ဒီကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ ညီမလေးသိခဲ့ရင်….။
အခြား ၀တ္ထုတို, အက်ဆေး
ရေးသားသူ : မိုးသက် // 10:51 AM
Posted by မိုးသက် at 10:51 AM Read more
Labels: ၀တ္ထုတို, အက်ဆေး
blackroze October 11, 2015 at 9:00 AM
ငါဂစ်တာတီးတုန်း ကတော့ပေါက်နေတဲ့ ကြိုးဆို
သုံးမရတော့ဘူးဆိုတာ သေချာ နေပြီဘဲဟာ..
နောက်ပြီး ကြိုးကို လည်းဘယ်တော့ မှ အပိုမဆောင်ထားတတ်ဘူး။
အဲ..ဒါပေမဲ့ ကြိုး ပြတ်ပြီ ..ပေါက်ပြီဆိုရင်လည်း
မိုးသက် .. သုံးလို့ အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်
မိုးသက် October 16, 2015 at 11:40 AM
မားပစ်.. ခုတော့ ဂစ်တာတောင် မတီးဖြစ်တော့ဘူး (ပြတ်ကရော)